भर्खर बिहे गरेकी “माछा”हरुलाई छोडेर श्रीमान् बिदेश गएपछी……. – Gulminews
Home/ बिचार/भर्खर बिहे गरेकी “माछा”हरुलाई छोडेर श्रीमान् बिदेश गएपछी…….
भर्खर बिहे गरेकी “माछा”हरुलाई छोडेर श्रीमान् बिदेश गएपछी…….
गुल्मीमा यी माछा र शर्पहरुको बिगबिगीले विकाराल रुप लिदैछ । शर्पले माछा खोज्दैन यहाँ माछाले नै बढि मात्रमा शर्प खोज्न थाले पछि यसले थप विकाराल रुप लिँदै आएको हो । फोन रकर्ड सार्वाजानिक गर्न पाउन हो भने प्रष्ट सुन्न सकिने् छ कि –आज माछा खाना आउनु के , यहाँ कति तडपिएको छ माछो …’ भन्ने यौन अपिल । उनिहरु कै शव्दमा माछो त्यसरी हरवखत तड्पीनुको कारण बैदेशिक रोजगारको पोसले पनि हुन सक्छ । ५० वर्ष सम्म श्रीमान घर नआई बेपत्ता हुँदा पनि सत नडगाई कुरेर बसेका तमाम महिलाहरु छन् । तर पछिल्लो चरण पैसा पनि आएकै छ ।
डाईभर दाई उसको नाम साईवर वहिनी उनको काम अर्थात फेशवुकबाटै बसेछ माछा शर्पको माया प्रिम । ति अविवाहित भनिएको माछाका ससुराले यसरी खार्दै थिए–‘ विदेशमा रहेका मेरा छोराको लाखौ लाख पैसा समात्दै हिड्दै तँ कसरी अविवाहित हुँ भन्न सकिस ? उता ‘शर्प’ महोदयकी श्रीमति पनि त्यही आएकी थिईन र सोधिन श्रीमान संग–‘ ए भन्ट टैले सँच्चै भनेकै होस ब्या गरेको छैन भनेर ? । टँ कसरी अविवाहित भईस् , म श्रीमति र छोरा छोरीका सामु , टेरीमा ठास्नी… ।
गलल्ल हासो… । उता ‘माछा’ मैयाँको शिर निहुरीएको थियो । यता शर्पलाई हिजो सम्म माछा असाध्धै मिठो लागे पनि आज काडा निकै तितो लागेको थियो । त्यसै भनेका रहेन छन बुढापाकाहरुले ‘माछा मिठो काँडा तितो’ । यो उखानले के संकेत गर्दछ भने पहिल्लै देखि पुरुषहरुले महिलाको अस्मीतालाई माछाको रुपमा सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्ने गरेका रहेछन् । अनि कति राम्रो जाल बुन्यो , मैले त हैन दाई माकुरीले हो ’ भन्ने गीत पनि त्यसै गाईएको होईन रहेछ ।
तिम्रा त बरु बुढा वर्षमा एक चोटी आउने ठाउँ भारतमा छन तर बुहारीका बुढा तिम्रा छोरा त कम्तीमा तिन वर्षमा नआउने गरी विदेश गएका छन नि होईन र ? सासुले मन थामे पो बुहारी अनि आफ्ना छोरीले पनि मन थाम्लान क्यारे होईन र ? उता बाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ छोरा छोरीलाई सम्झाए जस्तो गर्ने अनि ‘माछा’ खोज्न भने नहिडी नहुने । यसरी दुवै पक्षलाई असिमित र उत्कट यौन चाहन भएकै हो भने सवै मिलेर दिल्लीमा जस्तै एउटा रेडलाई एरिया तोकौं । काननुले त अझै न देला अवैध भए पनि तपाईहरु जस्ताले धन्धा चलाउँ तर यसरी सवैलाई माछा ठान्ने र बनाउने कार्य बन्द गरौं नत्र हिजोको एक टोलीलाई माछा मिठो काँडा तितो बनाए जस्तै भोली तपाईलाई पनि बनाउन सक्छ , चेतना भया….
बिकासका नाममा करोडौँ बजेट फ्रिज, जनस्तरबाट खबरदारी गरौँ
सापकोटाको अध्यक्षतामा गुल्मी अमेरिका नमुना अभियानको नयाँ कार्यसमिती
इन्द्रगौडामा जेसिबी पल्टियो, घाइते चालकलाई उपचारको लागि मजुवा लगिदै
पछील्ला ३ अप्डेट
प्राविधिक, सम्पादन सहयोगी, काठमाडौं
प्रमुख सम्बाददाता, तम्घास
‘आत्मा दहन सम्म पुगें’ – खिलध्वज पन्थी https://t.co/U4Q27i68As #Gulminews #Gulmi
जनप्रतिनिधि भेट्नै मुस्किल https://t.co/GYqR01jVdV #Gulminews #Gulmi
Gulminews.com isaNepali language based news portal website. It was founded in July 2007. Gulmi Chamber of Commerce and Industries (GCCI) awarded Gulminews.com with Excellent Journalism Award 2012.
कृपया हजुरको ब्राउजरमा बिज्ञापन रोक्ने एप्लिकेशन डिसेबल गरेर हाम्रा समाचारहरु हेर्न सक्नुहुनेछ ।